Goobaha loogu talagalay in lagu noolaado kirismas la yaab leh sanadka 2022 | Safarka Absolut
Meelaha loo tago si loogu noolaado kirismas la yaab leh
Lugaha Alberto | | Amsterdam, Islands Canary, Karibiyaanka, USA, Espana, Filipinas, Holland, Madrid, Morocco, Mexico, New York, Prague
Markay qaboobaha soo dhowaato, dhaxanta ayaa timaadda, xabadka la dubay iyo haa, sidoo kale Kirismaska. Xisbiga ugu caansan adduunka kaliya ma ahan inuu noqdo mid ku habboon inuu la joogo qoyska laakiin sidoo kale inuu tixgeliyo safar haddii aad rabto inaad ka baxsato cashada caadiga ah ee caadiga ah oo aad ku raaxeysato sicirka tartanka meelaha qaarkood. Sannadkan, Santa Claus ha kaa raadiyo kuwan soo socda meelaha loogu talagalay in lagu noolaado Kirismas la yaab leh.
3 Rovaniemi (Finland)
Deriska qalaad ee Yurub wuxuu isku xoojinayay sanado sidii mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan ee lagu raaxeysto kirismaska ​​cajiibka ah. Waxaa ka buuxay magaalooyin boqortooyo oo ay ku habsadeen mashquulkii suuqyada, jidadka qowmiyadeed ee dhex mara Atlas iyo xeryaha ku yaal saxaraha Saxaraha, Morocco waxaa ka buuxa layaab kuwa doonaya inay helaan xilli u gaar ah Kirismaska. Ku rid Marrakech, jardiinooyinkeeda iyo sookskeeda, si aad ula xiriirto magaalooyinka xeebta leh sida Essaouira oo aad u gaarto lamadegaanka ama, si fiican, u sahamiso waqooyiga dalka iyadoo loo marayo sheekooyinka quraafaadka ah ee Fez iyo Meknes si loogu dhowaado Chauen, magaalo soo jiidasho leh oo midab buluug ah rinji ah oo ku xanniban buuraha dhexdooda.
Yaan ku riyoon a Kirismaska ​​ee New York? Karaa barafka barafka ee Xarunta Rockefeller oo ku xigta geedkeeda weyn si loogu dhammeeyo Columbus Circle, Central Park, oo lumaya suuqa Kirismaska ​​oo ay kujiraan ilaa 100 istaag oo kaladuwan, dhawaq fiican, sax? Haddii kale, waxaad had iyo jeer sugi kartaa Sannadka Cusub ee Sanadka cusub oo gaara halka ugu sarreysa halkan mahadnaqa Sannadka Cusub ee loo dabaaldego Times Square oo ay ku xigto riwaayad nalalka ka yaabisa oo ka timaada shan goobood oo kala duwan oo magaalada ah.
Waxay yiraahdaan Santa Claus sanadka oo dhan wuxuu sugaa warshad luntay halkaasoo uu kula shaqeynayo xusulkiisa isagoo sameynaya dhammaan hadiyadaha lagu soo dhex qarin doono qiiqa dusheeda ee Kirismaska. Warka fiicani waa in meeshani jirto oo ay ku taallo agagaarka Rovaniemi, waa magaalo ku taal Finnish Lapland oo ku taal tuulada caanka ah ee Santa Claus Village, Meel aad ka ogaan karto warshadda iyo guriga ninka ugu caansan adduunka ee soo raaca iyadoo la raacayo joogista igloos, gawaarida jimicsiga ama, gaar ahaan, aragtida mid ka mid ah muraayadaha dabiiciga ah ee ugu xiisaha badan adduunka: Nalalka Woqooyi!
Ma waxaad raadineysaa Kirismas la yaab leh oo ku yaal meel gebi ahaanba ka duwan? Markaa muhiim maahan inaad aado dhanka kale ee aduunka adigoo raadinaya: jasiiradaha Canary waa janno labo saacadood uun diyaarad laga raaco, waxay kufiican tahay fasax aan lagaraneyn. Inkasta oo dhammaan jasiiradeeda lagu taliyay, waxaan doorannaa Fuerteventura, "xeebta jasiiradaha Canary", oo kugu martiqaadaya inaad gasho xilliga qaboobaha ee Atlantic ka hor ku lumaan fulkaano ay hurdaan, magaalooyinka hareeraha ka mara sida Corralejo ama xeebaha sida Cofete, kaas oo kiciya janno aan waqti lahayn.
Dhammaan dabaaldegyada Kirismaska ​​ee adduunka, Filibiin ayaa ugu dheer dhammaan. Laga bilaabo bilawgii Sebtember ilaa 6da Janaayo, jasiiradaha Aasiya waxaa ka buuxay dabaaldegyo iyo isboorti soo jiidaya sheeko xariirka qaranka saamaynta Isbaanishka, oo gebi ahaanba soo bandhigaysa jidadka iyo magaalooyinka juqraafi ahaan. Cudur daar kaamil ah in u safri kuleylka halka kuleylka, xeebaha sida El Nido ama jasiiradaha xiisaha leh sida xiisaha leh Bohol ay ka dhigayaan janno dareemayaasha qiimaha (oo ay ku jiraan kuwa duulimaadka) ay si gaar ah u jaban yihiin bilahaan.
Magaalada caasimada ah ee Czech Republic waxay kusii socotaa inay tahay meelaheeda gaarka ah ee loogu talagalay in indhaha oo dhan lagu fiirsado sida xilligii Kirismaska ​​loo soo dhawaaday Caan ku ah weyn Suuqyada kirismaska ​​ee ka baxa Magaalada Hore (oo ay ku jiraan Muuqaalka Dhalashada ee weyn), adoo maraya riwaayadaha muusikada caadiga ah ee Prague Opera ama jidadkeeda banaanka si ay ula socdaan khamri mulled ah oo gacanta ku jira, Prague waa magaalo ku habboon fasaxa kirismaska ​​ee aad had iyo jeer ku kacdo. Wax lala yaabo.
Rafaanta reer Mexico waa xulaf gaar ah dhammaan noocyada qorshooyinka kirismaska. Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato sicir-dhimista goobaha dalxiiskeeda iyo waayo-aragnimadeeda Riviera Maya, wax ka fiican ma jirto inaad duullimaad sameyso oo aad soo dhaweyso sannadka cusub ee qolalka qolalka u kaca, xeebaha, cenotooyinka iyo burburka Mayan. Haddii kale, waxaad had iyo jeer dooran kartaa xitaa booqashooyin gaar ah oo intaas ka badan sida kan magaalada San Miguel de Allende, halkaas oo shumacyo, piñatas iyo muraayadaha feerku ay diirinayaan Kirismas gaar ah oo lagu calaamadeeyay dhaqanka hiddaha iyo dhaqanka ee waddanka mariachis.
Halista iidda qoyskaas? Saacado iyo saacado la samaynayo digaag la dubay oo ay weheliso inta kale ee cashada ah? Haddii aad raadineyso inaad ka baxsato Kirismaska ​​sannad kasta, Amsterdam ayaa suurtogal ah ikhtiyaarka ugu fiican. Caadi ah oo gaar ah, magaalada Nederland ayaa ka mid ah kanaalladiisa, dukaamada kafeega iyo soojiidashada dhaqameed cudurdaarka ugu wanaagsan ee kirismaska ​​cajiibka ah ee lagu kabi karo suuqyada kirismaska, riwaayadaha muusikada caadiga ah laakiin, gaar ahaan, bandhiggaas oo la yiraahdo Damaashaadka nalalka in laga bilaabo dhamaadka Nofeembar ilaa bilowga Janaayo daadad fara badan bartamaha magaalada laydhadh LED ah. Badbaadada badbaadada.
Magaalada Austrian sidoo kale waa mid ka mid ah magaalooyinka Yurub ee ku habboon in la lumiyo inta lagu jiro maalmaha Diseembar iyada oo ay ugu wacan tahay fursado badan oo kala duwan: waad booqan kartaa suuqyadeeda Kirismaska ​​oo aad ku raaxeysan kartaa bandhig faneed heer sare ah oo ah magaalada uu ku dhashay Mozart, iyo kuwo kale fursadaha. Sidoo kale, haddii aad u safarto mid ka mid ah dhammaadka usbuuca ka hor Kirismaska, waad layaabi kartaa Krampus Runs iid, dhacdo ay jilayaan jinni caadi ah oo maxalli ah oo u adeegta sidii asturnaan loogu talagalay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo jidadkooda ku garaaca dharbaaxo.
Sawirka Mirador Madrid
Caasimadda Isbaanishku had iyo jeer waa ikhtiyaar wanaagsan marka ay timaaddo in lala kulmo Kirismas buuxa oo la yaab leh: socod ku dhex mara suuqyo badan, ka fiirso qurxinta, ku xafladayso ciidda Kirismaska ​​baararka casriga ah ama, si ka sii wanaagsan, sug 31-ka Diseembar midka ah Puerta del Sol waxay noqoneysaa meesha ugu caansan Spain. Sababtoo ah haa, waad ogtahay inaad had iyo jeer dooneysay inaad sanadka dhammaadkiisa kubixiso cunista canabka ku yaal bartamaha dalka.
Midkee kuwan ka mid ah meelaha aad ku noolaan lahayd ciid Kirismas ah la yaab leh?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Meelaha loo tago si loogu noolaado kirismas la yaab leh
Maxaa lagu arkaa magaalada Milan hal maalin gudaheed